Hypertension – Healthy Life Journal
All posts tagged "Hypertension"
——-၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊——– Q. ဆီးချိုရောဂါရှိသူဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သွေးပေါင်ကျတဲ့အခါ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ A. အပေါ်သွေးဖိအား ၉၀၊ အောက်သွေးဖိအား ၆၀ အောက်ကို သွေးပေါင်ကျတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့်...
မြန်မာလူမျိုးတွေကို ဘယ်အကြောင်းရင်းတွေက သွေးတိုးစေတာလဲ . . .
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း အငန်စားရင် သွေးတိုးတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ချက်အရ လူတစ်ယောက်က ဆား (Salt or Sodium) တစ်နေ့ခြောက်ဂရမ် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း) ပဲ စားသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သုတေသနတွေအရ ပျမ်းမျှအားဖြင့်...
အငန်အလွန်အကျွံစားခြင်းကြောင့် ကြာလာလျှင် ထိခိုက်နိုင်သည့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ
Q. အငန်အလွန်အကျွံစားတာကြောင့် ရေရှည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုထိခိုက်စေနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း A. မြန်မာလူမျိုးတွေက အငန်အရသာကို ကြိုက်တာများပါတယ်။ အငန်ကို အသင့်အတင့် စားတာကတော့ ရပါတယ်။ တချို့ကျတော့ မုန့်ဟင်းခါးစားတယ်၊ အဲဒီအထဲမှာ ငံပြာရည်ထပ်ထည့်ပြီး စားတတ်ကြတယ်။...
မြန်မာလူမျိုးများကို သွေးတိုးစေသည့် အကြောင်းရင်းများနှင့် ဆင်ခြင်စရာများ
Q. မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ ဘာကြောင့် သွေးတိုးရတာပါလဲ။ အငန်စားတာများလို့လား ဆရာ။ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) A. အငန်စားရင် သွေးတိုးတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ချက်အရ လူတစ်ယောက်က ဆား (Salt or Sodium) တစ်နေ့...
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. ရုတ်တရက် လေဖြတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကို သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ. လူနာတွေအနေနဲ့ မနက်က အကောင်းကြီး၊ ညနေကျမှ မူးတယ်.. မူးတယ်ဆိုပြီး လေဖြတ်သွားတယ်ဆိုတာ မကြာခဏ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သာမန်လူတွေ အိပ်လိုက်ရင် မနက်...
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ သွေးတိုးရောဂါရှိတဲ့သူတွေ မျက်စိမှုန်ပြီဆိုရင် ဘယ်လိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးရလေ့ရှိပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ ။ သွေးတိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ မျက်စိရောဂါသည် လူနာတွေကို ဆရာတို့မျက်စိဆေးရုံမှာ မကြာခဏတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကို လူနာတော်တော်များများက...
” သွေးကျဆေး ၃ မျိုးက ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်” သတင်းထွက်လာတဲ့အတွက် သောက်လက်စ သွေးကျဆေး ရပ်ပစ်ရမှာလား ဆရာ. . .
——————————————————————————————————————- ၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊ Q. အခုလတ်တလောမှာ သွေးတိုးကျဆေး သုံးမျိုးက ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းထွက်လာ တာကြောင့် သွေးတိုးရှိသူတွေက သောက်လက်စ သွေးကျဆေးကို ရပ်ပစ်ရမှာလားဆိုပြီး စိုးရိမ်မှုအပြည့်နဲ့ မေးလာကြပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး...
သွေးတိုးရှိသူ သွေးလှူလို့ ရ၊ မရ
မေး. သွေးတိုးရှိသူက သွေးလှူလို့ရပါသလားရှင့်။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်(အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. သွေးတိုးရှိတဲ့သူက သွေးလှူလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတလေ သွေးတွေအများကြီးထွက်သွားရင် မူးတာ၊ မောတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သွေးလှူဖို့ရာ အဓိက ဟေမိုဂလိုဘင် အားပြည့်၊ မပြည့်ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။...
သွေးကျဆေး ဆက်သောက်သင့်၊ မသင့် . . .
မေး. ညာဘက်ကျောက်ကပ်မှာ ကျောက်တည်လို့ လေးကြိမ်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိအကြိမ် ၂၀၀၃ခုနှစ်က ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီး ၅ လခန့်အကြာ သွေးကျဆေး MLONG5ပုံမှန်မသောက်မိလို့ ဦးနှောက်သွေးကြောပေါက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် ဘယ်ဘက်ခြမ်း လေဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀ခုနှစ်မှာ ညာဘက် ကျောက်ကပ်ကျောက်ပြန်တည်လို့ တတိယအကြိမ် ၂၀၁၅...
သွေးတိုးခြင်းအတွက် သဘာဝကုထုံး ငါးခု
သွေးတိုးတဲ့အခါ၊ ခေါင်းမူးတဲ့အခါ လိုက်နာသင့်တဲ့ သဘာဝကုထုံးငါးရပ်ကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ သဘာဝကုထုံး (၁) ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်ဖြူစားတာကြောင့် သွေးပေါင်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝကုထုံး (၂) အချိုနှင့် အဆီအအိမ့်ရှောင်ခြင်း အချိုနဲ့ အဆီအအိမ့်တွေက အ၀လွန်တာ၊ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်များတာတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အငန်ဓာတ်ပါတဲ့...
စကျတငျဘာ လ၊ 2020 ခုနှဈ